पुर्वेली | स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई….
फ्रेवुअरी 18, 2008
Posted by purbeli under आफ्नै कुरा,पुर्वेली
सर्वप्रथम त म यहाँहरु सँग माफी चाहान्छु किन भने हाल म मेरो आफ्नै कामको व्यस्तताले गर्दा खेरी यहाँहरु समक्ष्य नयाँ सामाग्री प्रस्तुत् गर्न सकिन । तर यहाँहरु सँग म वाचा गर्दछु कि केहि समय पछि पुन: यसलाई निरन्तरता दिनेछु । धन्यवाद!!!
विपनाको विहे इन्डियन सँग रे !
Posted by purbeli under जानकारी,पुर्वेली,फोटो ब्लग
आजभोलि नेपाली कलाकारहरुले विदेशी सँग विवाह गर्ने लहर जस्तै नै चलेको छ । हुन त यो चलन पुरानै हो । यो भन्दा केहि महिना अगाडी झर्ना बज्राचार्यले गोरे भेना सँग विवाह गरेकि थिइन । अब पालो आएछ विपना थापाको । एक ताकाको चर्चित नायिकाको रुपमा स्थापित विपना थापाले ३० वर्षको उमेरमा विदेशी (इन्डियन) नागरिक डा: आशुतोष भारद्वाज सँग यहि आउदो वैशाख ६ गते विहे गर्ने भा छ रे । विवाह हिन्दु संस्कार अनुसार नै गर्ने रे तर कहाँ गर्ने भन्नेको चाही टुङ्गो लागेको छैन रे । मान्छेले विवाह एक न एक दिन त अवश्य गर्नु नै पर्छ । त्यहि भएर विपनाले भारतिय सँग भए पनि लगन गाँठो कस्दै छिन तर खुसिको कुरा उनले विवाह पछि पनि आफ्नो नाम, थर र देश नबदल्ने पक्षमा छिन रे । साभार
प्रेममा धोका खाँदा…..
Posted by purbeli under पुर्वेली,प्रेम प्रसङग
भनिन्छ, यो संसारमा प्रेम बिना केहि पनि छैन र कुनै पनि प्रणी प्रेमबाट पृथक पनि छैन । प्रेमको व्याख्या गर्नेहरु यसै भन्दै प्रेमको महिमा गाउँने गर्दछ । अनि त मान्छेहरु प्रेममा अन्धो र पागल हुने गर्दछ । हुन पनि किन नहोस त जिवनको अर्को पाटो भन्नु नै प्रेम हो जहा सम्म मेरो बुझाई छ । हामीले सुन्ने अनि देख्ने गरेका छौं मान्छेले प्रेममा धोका खाँए पछि घटाएका थुप्रै खाले घट्नाहरु । यसरी प्रेममा धोका खाएर यस्तो खाले घट्ना घटाउनेमा प्राय: गरेर केटि नै हुने गर्दछ । प्रेमि नै मेरो सबथोक हो उ भए मलाई अरु केहि पनि चाहिन्न अनि सोच्छन् संसारमा म जतिको भग्यमानी अरु कोहि पनि छैन किन भने मलाई जति माया गर्ने दुँनियामा कसैको प्रेमि छैन । यस्तै खाले मानसिक्ता भएकोहरुले अग्रीम रुपमा आँफ्नो सर्वस्व नै सुम्पिने गर्दछ । अनि आफ्नो सर्वस्व हरण भैंसके पश्चात उनिहरु निन्द्राबाट बिउझिए झैं बिउझन्छन् । अझ धोका दियो भने त झन के-के गर्छन थाहा नै हुन्न । यस्तै खाले घट्नाको एक पात्र बनेकि छिन रुपन्देहीकी कृष्णा थापा । आँफुलाई प्रेमको नाटक गरि अनैतिक व्यवहार समेत गरेको भन्दै रोकेर राखेको तिनवटा गाँडीमा तोडफोड गरेकि थिइन । स्वास्थ्य परिक्षणको लागी अस्पताल लगेपछि पनि बिक्षिप्त देखिने कृष्णाले उक्त अस्पतालको झ्याँल समेत तोडफोड गरेकि थिइन । यसरी न्याउरी मारी पछुतो गर्नु भन्दा त बरु पहिले नै सोचबिचार पुर्‍याएको भए आज उसले यो दिन त भोग्नु पर्ने थिएन ।
बाख्राको गर्भमा मान्छेको बच्चा ?
Posted by purbeli under अनौंठो,पुर्वेली
यो कुनै बनाओटी र काल्पनिक हैन यो हो सत्य घट्ना। तै पनि तपाईलाई पत्यार लाग्ला या नलाग्ला बाख्राको गर्भमा मान्छेको बच्चा भेटियो भन्दा तर पत्याउनुहोस् या नपत्याउनुहोस् वास्तवमा यो घट्ना सत्य नै हो । आउनुहोस् हेरौं कुन ठाउँमा घटेको रहेछ त यस्तो खाले घट्ना…………..
डिसेम्बर 26, 2007
झोलुंगे पुल खस्दा…..
Posted by purbeli under घट्ना,पुर्वेली,फोटो ब्लग
भेरी नदी किनारमा मेला हेर्न करिब पाँच सय र्सवसाधारणले खचाखच झोलुंगे पुल खस्दा कम्तीमा १५ को मृत्यु भएको थियो।
– कम्तीमा १५ को मृत्यु
– ७० भन्दा बढी बेपत्ता
– ६० जनाको उद्धार
– ३२ उपचाररत
– करिब ३ सय जना लठ्ठा समातेर निस्किए
डिसेम्बर 21, 2007
निर्वस्त्र आउनेलाई छुट
मानिसले कपडा किन किन्छन् र किन लगाउछन् ? इज्जतको लागी वा आ-आफ्नै उत्तर होला । इङल्यान्डको साउथ वेल्स स्थित “स्टोर २१ ” ले एउटा यस्तो अनौठो र नयाँ योजानाले आफ्नो पसलको उद्घाटन गर्‍यो कि जहा सम्म मान्छेले कपडा किन किन्छन् र लगाउछन् भन्ने परिभाषालाई नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको थियो । पसलको उक्त उद्घाटन समारोहमा जो क्रेताले कम भन्दा कम कपडा लगाएर आफुलाई चाहिने कपडा किन्न आउछ उसको लागी विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो । आफुलाई जतिसक्दो निर्वस्त्र तुल्यायो पसलेले छुटको राशिमा वृदि गर्दै जान्थ्यो। यहि छुटको होडमा एक गर्भवति महिला पनि पेन्टि र ब्रा मा मात्रै देखा परिन्। उनलाई त झन ५० पाउन्ड छुट समेत मिल्यो । अब हामीले पनि कपडा किन्दा खेरी सोच्नु पर्ने भो कस्तो खाले कपडा किन्नु पर्ने हो ?
विवाहको लागी १५० केटा हेरिन
के तपाई विवाहित हुनुहुन्छ ? वा विवाह नै गर्नु भएको छैन ? यदि तपाईले विवाह गर्नु भएको छ भने केटाले केटी र केटीले केटा कति जना हेर्नुभयो ? एक,दुई,तिन,वा सो भन्दा बढि ? हदै भए पाँच सात जना हेर्नु भयो होला। तर तपाईलाई थाहा छ ? सर्वियाकी मिलुन्का डाबोभिचले कति जना केटा हेरिन् ? उनले १५० जना केटा हेरेकी थिइन् । उनको विवाह गरिदिनको लागी उनका बाबुआमाले उनि १४ वर्ष लागे देखी केटा खोज्न शुरु गरेका थिए तर मिलुन्का २४ वर्ष पुग्दा पनि बाबुआमाले खोजेको केटालाई आफ्नो जिवनसाथि बनाउन सकिनन् । उनको रोजाई अनुसार अग्लो,आकर्षक र कामदारी चाहिएको रे । के उनले रोजे जस्तै केटा पाउलिन् त ?